ယူအက်စ်နိုင်ငံသား အမြန်ဖြစ်ဖို့ MAVNI သို့ဝင်ပါ၊ (သေလျင်တာဝန်မယူ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Legal Information/Visa » ယူအက်စ်နိုင်ငံသား အမြန်ဖြစ်ဖို့ MAVNI သို့ဝင်ပါ၊ (သေလျင်တာဝန်မယူ)
ယူအက်စ်နိုင်ငံသား အမြန်ဖြစ်ဖို့ MAVNI သို့ဝင်ပါ၊ (သေလျင်တာဝန်မယူ)
Posted by ဦးေၾကာင္ၾကီး on Apr 24, 2013 in Legal Information/Visa, U.S. News | 16 comments
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဝန်ခံပါရစေ၊ ကျနော့်ကို အမေရိကန် စီအိုင်အေ ထောက်လှမ်းရေး အရာရှိတဦးက ပိုက်ဆံပေး ခိုင်းလို့ ဒီစာကို ဘာသာပျံပါတယ်။ ရဲဘော်မသေ သေသော်နတ်ပြည်တက်…
တပ်မဒေါ်အင်အားရှိမှ တိုင်းပျီအင်အားချိမည် (ဤဂါးခေါင်းစဉ် ဖြစ်အိ) အင်္ဂလိပ်လို အတိုကောက် MAVNI စစ်သားရှာဖွေ စုဆောင်းရေး အစီအစဉ်နဲ့ တရားဝင် နေထိုင်သော အမေရိကန်နိုင်ငံသား မဟုတ်သေးသူများကို ကြည်းတပ်မှာ ရှာဖွေစုဆောင်းနေသည်။ ကြည်းတပ်မတော်တွင် တာဝန်အပြည့် ထမ်းဆောင်ရန် ဗျူဟာမြောက် အဆင့်သတ်မှတ်သော ဘာသာစကား ၄၄ခုထဲမှ စစ်သားသစ်များ အလိုရှိသည်။
လျင်မြန်သွက်လက် စီဒဇင်ကတ် – နိုင်ငံသားလျောက်ထားမှု လျင်မြန်စွာ ရရှိမည်။ စစ်သားအားလုံး အခြေခံ စစ်သင်တန်း ဆယ်ပတ်ပြီးလျင် ကူးပြောင်းလာသူ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့် ရည်မှန်းချက် ဖြစ်သည်။ ဤအစီအစဉ်အရ စစ်သားသစ်များသည် အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့် (ခ) ဂရင်းကတ်စနစ်ဖြင့် ကာလကြာမြင့်စွာ စောင့်စားရန်မလိုဘဲ ခိုလှုံခွင့်၊ ရွှေ့ပြောင်းအခြေချ၊ ယာယီအစောင့်ရှောက်ခံ ကဲ့သို့ non immigrant ဗီဇာစနစ်မှ နိုင်ငံသားအဖြစ် တိုက်ရိုက် ကူပြောင်းနိုင်ပေမည်။ တပ်မဒေါ်သည်သာ လျင်မြန်သွက်လက် စီဒဇင်ကတ် ကမ်းလှမ်းနိုင်သည့် တခုတည်းသော (မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်နှင့် နင်လားငါလား) အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီး စစ်မှုထမ်းသာလျင် ဂရင်းကတ် မလိုဘဲ နိုင်ငံသား ကူးပြောင်းခွင့်ရှိသည်။
သောက်ကျိုးနဲ ကောင်းချက် – အရည်အသွေးမြင့် လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်း နှင့် ကျောင်းဆက်လက်တက်ခွင့်၊ ပုံမှန်လစာအပြင် တပ်မိသားစုရာရှင်၊ ခေါင်းဆောင်မှု အရည်အချင်း မြှင့်တင်ခွင့်၊ ပညာရေး အထောက်အပံ့၊ ဂုဏ်သိက္ခာရှိ အလုပ်အကိုင်တာဝန်ဖြစ်ခြင်း။
ဝင်ခွင့် သတ်မှတ်ချက် – (၁) နိုင်ငံသား မဟုတ်သေးသူ အုပ်စုများထဲမှ E, F, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, TC, TD, TN, U OR V ခိုလှုံခွင့်၊ ရွှေ့ပြောင်းအခြေချ၊ ယာယီအစောင့်ရှောက်ခံ သတ်မှတ်ချက် အကြုံးဝင်သူများ (၂) နိုင်ငံတွင်း အနဲဆုံး ၂နှစ်နေထိုင်ပြီး သက်တမ်းတိုး နေထိုင်ခွင့်လျောက်ထားမှုအား ရက်၉ဝထက် ကျော်လွန်ခြင်း မရှိသူ (၃) ကြည်းတပ်ဝင်ခွင့် စံနှုန်းများဖြစ်သည့် အထက်တန်းအောင်လက်မှတ် အပြင် ကြည်းတပ်ဖွဲ့ စာမေးပွဲ၊ မူရင်းဘာသာစကား ကျွမ်းကျင်မှု စာမေးပွဲများပါ အောင်မြင်ရမည်။
တပ်သားသစ်အဖြစ် ယနေ့အလိုရှိသော သတ်မှတ်ဘာသာစကားပြော အုပ်စုများစာရင်း
Albanian Amharic Arabic Azerbaijani Bengali Burmese Cebuano Cambodian-Khmer Chinese Czech French (with citizenship from an African Country) Georgian Haitian Creole Hausa Hindi Igbo Indonesian Korean Kurdish Lao Malay Malayalam Moro (Tausug/Maranao/Maguindanao) Nepalese Pashto Persian Dari Persian Farsi Portuguese Punjabi Russian Sindhi Serbo-Croatian Singhalese Somali Swahili Tagalog Tajik Tamil Thai Turkish Turkmen Urdu (with citizenship from Pakistan or Afghanistan) Uzbek Yoruba
MAVNI ဘာသာစကား အစီအစဉ်အား စိတ်ဝင်စားပါလျင် ရဲဘော်ပဲလှော်၏ အချက်အလက်များကို ဖော်ပြပါ www.goarmy.com/info/mavni တွင်ထည့်သွင်း ရှာဖွေပြီး ဒေသခံ တပ်သားသစ် စုဆောင်းရေးရုံးများသို့ ဆက်သွယ်ပါ။
လခွီး.. ရတာမှ ဒေါ်လာတရာ… ပျံလိုက်ရတဲ့စာ မနည်းမနော….။
MAVNI INFORMATION SHEET FOR LANGUAGE RECRUITS
Military Accessions Vital to the National Interest (MAVNI) isarecruiting program which allows certain legal, non-citizens to enlist in the Army. The Army is enlisting Soldiers onto Active Duty with critical language and culture skills in one of 44 strategic languages.
Soldiers must apply to receive expedited citizenship processing. The goal is to naturalize all Soldiers by the time they graduate from ten weeks of Basic Training. Soldiers who enlist in this program are able to move from non-immigrant visa or asylee/refugee/TPS status directly to citizenship, bypassing the lengthy Green Card process.
The military is the only employer who can offer expedited citizenship and only military service members can naturalize without first obtainingaGreen Card.
High quality training and possible opportunities for advanced schooling
Steady income with benefits for Soldiers and Family members
Honorable profession and career
2. They must be legally present in the U.S. foraminimum of2years withoutasingle extended absence over 90 days.
3. Must meet certain Army criteria to include:ahigh school diploma, plus qualifying scores on the Armed Forces Qualification Test and proficiency test in the native language.
If interested in the MAVNI language program please enter your information at the following website: www.goarmy.com/info/mavni and visit your local recruiter.
အဲဒါ အမေဒစ်ကန်စစ်တပ်မှာ စစ်သားလုပ်ဖို့ဟာ ဘာလို့ သတ်မှတ်စကားပြောအုပ်စုခွဲနေရသေးသလဲပဲ..
သိပ်မပြောတတ်ရင်တောင် ယန်းကီးအက်ဆဲန့်ကို နားထောင်တတ်ရင်မရဘူးလားဟင်..။
အို… ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တောင်ကိုရီုးယားမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းကင်းလွတ်ခွင့်ရရင် လျှောက်သင့်တယ်
တောင်ကိုရီးယားကို သွားရမယ်ဆိုရင်တော့ မနိပ်ဖူး…
မြောက်ကိုရီးယားက သူ့အနုမြူဗုံး သူ့ဟာသူလွတ်ကျပြီးကွဲရင်
အလကားနေရင်း အချောင် ရေဒီရေးရှင်းသင့်နေမှာစိုးလို့….
ဟုတ်ဖူးလေ အန်တယ်ဂျီး ဦးပါရဲ့.. ခုဟာက ယူအက်စ်ကြည်းတပ်မှာ အဲဒီဘာသာစကား ပြောသူတွေ အလုံအလောက် လိုချင်လို့ သီးခြားခွဲထုတ် ခေါ်ပေးနေတာ။ ကာယကြံ့ခိုင်မှုနဲ့ အင်္ဂလိပ်စကား တတ်ကျွမ်းမှုကတော့ နဂိုရှိရမှာပေါ့။ နို့မို့ဆို ဘယ်လိုသွား အုပ်ချုပ်မလဲ။
ယူအက်စ်က.. မကြာခင်မှာပဲ.. နိုင်ငံထဲခိုးဝင်နေထိုင်နေတဲ့နိုင်ငံခြားသား ၁၂သန်းကို နိုင်ငံသားဖြစ်မှုလမ်းကြောင်းပေါ်တင်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်..ဥပဒေပြုလွှတ်တော်က.. ဥပဒေကြမ်းပြုစုနေပါတယ်..
ပြီးရင်မဲခွဲ.. သမ္မတလက်မှတ်ထိုး.. ဥပဒေဖြစ်ပြီပေါ့..။
မြန်မာပြည်က.. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဘာတွေးလုပ်နေမှန်း.. မမှီသူတွေ.. ဆက်စပ်တွေးနိုင်အောင်လို့ပါ..။
သိသာထင်ရှားပြောရရင်.. မြန်မာလူမျိုး၅သန်းအထက်ကြီးက.. ကမ့္ဘာနိုင်ငံအနှံ့နေထိုင်နေကြတဲ့.. “မဟာမြန်မာရွေ့ပြောင်းခေတ်ကြီး”ဖြစ်ပါတယ်လို့…။
မြန်မာပြည်ဟာ.. နိုင်ငံသားတွေဆုံးရှုံးနေတာ.. ရတာထက်ပိုများနေတာပါလို့..။
တိုင်းပြည်တခုကို..အလုပ်လုပ်တဲ့… နိုင်ငံသားများမရှိပဲ.. တည်ဆောက်၍မရပါ…။
အခုပရိုဂရမ် MAVNI က ..အရင်အီရတ်နဲ့ စစ်ဖြစ်နေတုံးကတခါလုပ်ဖူးပေမယ့်.. အဲဒီတုံးက.. ဂရင်းကဒ်ပြီးမှစစ်ဒဇင်မို့ နည်းနည်းပိုကြာပါတယ်..
အခုစနစ်အရ.. ဂရင်းကဒ်(ပီအာ)မလို.. ဒါရိုက် စစ်ဒဇင်ဖြစ်မှာပါ..
.. အမေရိကားရောက်နေပြီး ဗီဇာနဲ့နေသူတွေကိုရည်ရွယ်တာပါ..။
သာမန်အားဖြင့် ယူအက်စ်ကျောင်းလာတက်တဲ့.. နိုင်ငံခြားသား ကျောင်းသားတွေမှာ.. အမေရိကန်စစ်ဒဇင်ဖြစ်ဖို့မလွယ်ပါဘူး..။ မလွယ်ဆို.. ကျောင်းပြီးရင်..ကျောင်းဗီဇာ F သက်တန်းကုန်တာမို့.. ပြန်ရဖို့အထုတ်ပြင်ရင်ပြင်..မပြင်ချင်ရင်.. ဗီဇာပေးနို်င်တဲ့အလုပ်ရှာရတာပါ….။
အဓိကအားဖြင့်. .H ဗီဇာတွေသွားလျှောက်ရပြီး.. ပရိုဗီဇာမို့.. တခြားနိုင်ငံသားတွေနဲ့.. အင်မတန်ကို.. ပြိုင်ရခက်ပါတယ်..
..ရရင်တောင် နှစ်ပေါင်းများစွာ လစာနည်းနည်း.. အခွန်များများဆောင်အလုပ်လုပ်ရင်း.. ဂရင်းကဒ်.. အဲဒီကမှ..၅နှစ်ထပ်ကြာရင်.. စစ်ဒဇင်လျှောက်ပေါ့…
ကျောင်းတက်နေရင်း.. တပ်ထဲဝင်.. သာမန်အားဖြင့်..တပ်ထဲကန်ထရိုက်နဲ့ ၃နှစ်လုပ်.. ပြန်ထွက်ရင်း.. တပ်ကစပွန်စာ. ဂရန့်.ငွေကြေးနဲ့..ကျောင်းဆက်တက်..
ဆိုတော့.. ၅နှစ်လောက်အတွင်းမှာ.. ပညာလည်းစုံ.. လစာလည်းရှိ.. အတွေ့အကြုံလည်းရ.. စစ်ဒဇင်လည်းဖြစ်တာပေါ့..
အမေရိကားမှာ.. အမေရိကန်ဖြစ်ချင်တဲ့.. မြန်မာတွေလျှောက်ကြစေလိုကြောင်း….
မသိရင်.. ကိုရင်ကြောင်ကြီးပြောတဲ့.. စီအိုင်အေအရာမရှိအစား.. သိသလောက်ဖြေပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း…
ဝင်ခွင့် သတ်မှတ်ချက် –
(၁) နိုင်ငံသား မဟုတ်သေးသူ အုပ်စုများထဲမှ E, F, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, TC, TD, TN, U OR V ခိုလှုံခွင့်၊ ရွှေ့ပြောင်းအခြေချ၊ ယာယီအစောင့်ရှောက်ခံ သတ်မှတ်ချက် အကြုံးဝင်သူများ
(၂) နိုင်ငံတွင်း အနဲဆုံး ၂နှစ်နေထိုင်ပြီး သက်တမ်းတိုး နေထိုင်ခွင့်လျောက်ထားမှုအား ရက်၉ဝထက် ကျော်လွန်ခြင်း မရှိသူ (၃) ကြည်းတပ်ဝင်ခွင့် စံနှုန်းများဖြစ်သည့် အထက်တန်းအောင်လက်မှတ် အပြင် ကြည်းတပ်ဖွဲ့ စာမေးပွဲ၊ မူရင်းဘာသာစကား ကျွမ်းကျင်မှု စာမေးပွဲများပါ အောင်မြင်ရမည်။
ဦးကြောင်ကြီးရဲ့ ဒေါ်လာ ၁၀ဝ ဆိုတာ ပွိုင့် ၁၀၀၊ မြန်မာငွေကျပ် (၁၀၀) ကို ပြောတာမဟုတ်လား … လူအထင်ကြီးအောင် ဒေါ်လာ ၁၀ဝ တဲ့ …
စစ်တပ်တော့ ဝင်ချင်ပါတယ်…… တော်ကြာဝင်ပီးမှ တောင်မြောက်ကိုရီးယား စစ်ဖြစ်ရန် ဒွတ်ခ…..
မောင်ခိုင်မာ (စမ်းချောင်း) says:
ဒါလေးပြန်တာ တရာတောင်ရတယ်ပေ့ါ.. နောက်ဆို ကျနော်ကို့ပို့ပေး။ ၅ဝ ယူမယ်
နတ်ပြည်မှာ အဲယားကွန်း အမြဲရလို့လား
သေရင် တာဝံ ယူဘူးဆိုဒေါ့ …
ဘာရို့ အမိုက်ခံ ဝင်ရမှာဒုံး …
ဒက်ဒီဘဲ ဝင်ဒေါ့ ..
ဟုတ်ပါ့ တေရင် တါဝံမယူဘူးဆိုရင် ဒီမှာပဲနေဒေါ့မယ်ဂျာ
သေရင်တာဝန်မယူဘူးဆိုတော့… အလောင်းဒွေဘာဒွေ သဂြိုလ်မပေးဘူးလို့ဆိုလိုတာလား
အင်းလေ… စစ်မြေပြင်မှာစိုရင် အထွေအထူးသဂြိုလ်ဇယာမလို